0622Tantara - FJKM Amparibe Famonjena
Ny hiram-pivavahana sy ny fivoarany (Jona 2022)
Raha nanomboka ny tantaran’ny Hiram-pivavahana sy ny Fivoarany isika nandritra ny fotoana lavalava izay, dia nisy foana ny fanahy niniana, na miantsoro-mianoatra eo am-pitantarana, satria lalovan’ny foto-kevitra isan-karazany ny tantara, ka indraindray misy mampalahelo kely, indraindray misy resaka fanjanahantany, indraindray misy resaka fanjanahan-tsaina sy ny antony maro. Ary tsy mahagaga izany satria amin’ny maha tantara azy, dia misy misalovana eny hatrany izany.
Koa aza atao fanahy manan-tsiny raha misy ny miverimberina nefa mahatsara antsika ny teny “AVERINA” hoy Paoly Apostoly.
Efa nisy hatry ny fahagolan-tany ny fisotroan-toaka, na ny voalaza ao amin’ny Soratra Masina izany na ny teto Madagasikara nosindrazantsika. Tsy voaresaka kosa anefa raha nisy ny hira nifanindran-dalana tamin’izany, fa ny voka-dratsiny hatrany no voalaza mandrakariva.
Vao tonga kely foana teto Madagasikara ny Filazantsara nentin’ny Misionera Anglisy, dia efa nisy ny hiran’ny Sampana Vokovoko Manga na tsy mbola nisy aza ny fikambanana ara-dalàna ary ny hira mahazatra an-dry zareo Anglisy no nentiny sady nadikany ho amin’ny fiteny Malagasy.
Tsy ela taorian’izany, rehefa lasa zanatany Frantsay i Madagasikara, dia ireo Misionera Frantsay koa no nifarimbona tamin’ny Malagasy sy ireo Misionera Anglisy nandrafitra ny Fihirana Vokovoko Manga voalohany.
Koa araka ny voalaza teo aloha, dia nisy ny Hira isan-karazany tao, izay toy ny tahiry fotsiny ihany noho ny tsy fampiasana azy ary nisy karazany roa na telo izy ireo:
* Tao ireo izay mampihomehy fa hira natao ifandrabirabian’ny samy mpisotro toaka, koa rehefa samy mamo izy no mifanatri-tava dia miventy ny hira ao amin’ny Fihirana amin’izay sady mifampivazavaza.dia miafara amin’ny hehin’ny adala izany ary ny fiafarany dia miara-mihoaka izy rehetra.
* Tao koa ny hira izay niniana nanentana ny mpisotro hahalala mionona ka mahazo misotro ihany fa asiana fetrany ifampifehezana, ary na Misionera Frantsay na Anglisy dia samy nanao izany avokoa satria ry zareo (sasany) dia mbola misotro tokoa ary manentana ny Malagasy hahay mifehy tena amin’ny zava-pisotro mahamamo. Mitovy fa tsy tena sahala amin’ny fanjanahan-tsaina natao tamin’ny vahoaka Malagasy izany ary nahomby tamin’ny olona sasany ihany.
* Tao koa ireo hira tena sangan’asan’ny Misionera Frantsay izay tsy nanafina ny maha mpanjana-tany azy ary nampirisika ny fisotroana ho amin’ny antonony, toy ny fahalalana onony ihany koa, saingy tsy manafina ny fanentanana HANAHAKA azy eo amin’ny fiainana andavanandro, izany hoe: Misotro ihany fa atao miaraka amin’ny fihinanana sakafo ara-dalàna.
Misy hira iray mitondra ny lohateny hoe: “I Frantsa ry Jehovah mba tahio”, izay tsy nisalasalan’ny Misionera Frantsay ny nampiditra azy tao anatiny satria tsy nisy sakana na kely akory izany tamin’ny
fotoan’androny. Tsy tsaroana loatra ny feon-kira momba io hira io, fa ny mpikaroka angamba no hitrandraka izany.
Koa raha mifarana ankehitriny ny fitantarana ny hiram-pivavahana ao amin’ny sampana Vokovoko Manga dia mety sady tsara ihany ny fisian’ny fanentanana momba ny fianarana ny hira mba ho masaka tsara ao am-pon’ny vahoaka kristiana, indrindra fa io fihirana voarafitra io izay tena misy literatiora voalanjalanja tsara, mifanaraka amin’ny foto-kevitry ny sampana Vokovoko Manga.
Koa raha misy fihirana misy tononkira tena voavoatra tsara dia isan’izany tena lavorary avokoa ny fihirana Vokovoko Manga farany io. Ny tena mampalahelo anefa dia ny tsy fisian’ny fianaran-kira Vokovoko Manga loatra, fa mijanona ho tahiry fotsiny izany ary na ny mpikambana ao anatin’ny sampana aza tsy mahafehy tsara ny hira rehetra akory! Tena mampalahelo izany, nefa tsy misy antony tena mampivelatra haingana sady tsara mihoatra ny fahazaina ny hiran’ny sampana, ary manomboka amin’ny tompon’andraikitra izany, fa tsy ho an’ny Rantsana Fanantenana irery ihany.
Koa raha misy zokin’adidy tokony hataon’ny Tompon’andraikitra ao amin’ny sampana Vokovoko Manga, dia ny fianarana sy ny fampianarana ny hira, ho masaka ao am-pon’ny mpikambana sady hahazoany mifanentana amin’ny ady, dia ny zava-mahamamo sy mahadomelina izay tena fositra manimba ny firenena sy ny taranaka ho avy rahateo.
Aoka tsy ho hadinointsika ny tenin’ny olona malaza, voarakitra ao amin’ny teny fanolorana ny boky fihirana Vokovoko Manga manao hoe : “Raha tsy foanantsika ny toaka, dia izy no hanafoana antsika.